Ikhekhe ngeCherry Recipe
Silungiselela indebe elula kunye nee-cherries I-pastries ezenziwe ngamanzi zihlala zihle, zivuyisa kwaye zicolile kakhulu! Enye yeenguqu ezilula ze dessert elula kwaye elula ikhefu. Iigcakes azidingi iinzame kunye nobuchule obuninzi, kodwa i-taste is always delighting! Namhlanje silungiselela ikhekhe nge-cherry omisiwe. Esi sisitya esihle sokupheka, ngakumbi xa iinqabileyo zincinci. I-cherry nje eyomileyo yinto elula kakhulu ukuyisebenzisa, ngokungafani nokutsha okanye iqhwa, kuba ayifuni ukulungiswa kwangaphambili - sele isele iyomile kwaye iqhutywe (kodwa usacinga yonke into ebenziwayo, ekubeni ndineengcezu ezine ezifanayo kunye nemikhosi - kakhulu akuyi kuba mnandi ukukhubeka kwisitya kwikhefu, ongayilindele nhlobo). Ukuze ukhonze ikhekhe, kungcono ukupholisa kancane, ukuba uyayifisa, ufafaze ushukela ophuhliweyo okanye uthele kwi-icing icing. Sinikeza isiseko, kwaye zonke iintlobo zemizamo zihlala kwintetho yakho!
Ukhula lwe-Wheat 1.5 tbsp.
Ibhotela 150 g
I-Sugar 1 tbsp.
I-Cherry efunyenwe ngu-150 g
Amanzi abilayo 3 tbsp. l.
Inyathelo 1 Ukulungiselela ikhekhe sithatha umgubo wengqolowa, ushukela, amaqanda, ibhotela ephosiweyo, i-cherry candied.
Inyathelo 2 Phula i-oyile ezithambileyo kunye noshukela kwi-mass mass.
Inyathelo 3 Emva koko, qalisa iqanda elinye ngexesha - ukuxuba inhlama kakuhle.
Inyathelo 4 Hlanganisa amanzi, ukupheka i powder kwaye wongeza umgubo - inhlama kwisakhiwo sayo ayifani nekhemisi enunci.
Inyathelo 5 Bese ungeze i-cherry udibanise kakuhle.
Inyathelo 6 Thela ibhetri kwisibumba kwaye uyibeke.
Isinyathelo 7 Bhaka kwi-oven ye-160 ° C malunga nemizuzu engama-20 ukuya kwimizuzu engama-25, uze ukonge izinga lokushisa ukuya kwi-180 ° C kunye ne-oven uze ulungele - enye imizuzu engama-20 ukuya kwe-30. Ukulungele ukukhangela nge-wood skewer-ukusuka kwikhekhe ekulungele kufuneka ihambe yome.
Jam kusuka kwi-cherry
Iqhamo kunye nekhekhe
I-pie nama-cherry kunye nee-ammondi
Iindlela ezihlanu zokuqalisa ubomi obutsha
Kuba ngubani uAbramovich noZhukov baqhawule: iindaba zakamuva, amahemuhemu, izimvo, iifoto
Yintoni ozoyibhalela umfana ukuba ufuna ukumazi kwi-intanethi?
Ukunyangwa kweencwadi ngokukhulelwa
Ukuzalwa kwangaphambili: usongelo, unyango
Ngaba udinga ukutya? Iingxabano kunye nokuchasene
Indlela yokukhula ngokukhawuleza iinwele zakho
I-Solarium: into engcono kwaye eyingozi
Ukunyanga kwamayeza angabakho ekhaya
Iibisiki kunye neyeyi kunye neziqholo
I-Flavonoids zizinto ezintle zempilo nobuhle
Ikhukhi kunye nebhokisi ye-peanut kunye ne-chocolate
Ukuhamba nge ham, isipinashi kunye noshizi
Kutheni amadoda adibana neendoda zabo zangaphambili?
Ziziphi ii-diapers ezivuselelekayo?